Cologne Bonn inowedzera network kuSlovakia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Cologne Bonn inowedzera network kuSlovakia
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Investments • nhau • Slovakia Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Kwangori mwedzi mishoma mushure meye Ultra-yakaderera mutengo mutakuri (ULCC) yatanga masevhisi kuCraiova neTuzla, Wizz Air ikozvino inobatanidza Cologne Bonn Airport neSlovakia. Kupemberera sevhisi nyowani nhasi, iyo kaviri-vhiki rinongedzera kuKošice rakatanga musi wa25 Chikumi, vachishandisa ndege-180-chigaro cheA320s pane 1,040 kilometre chikamu.
"Nzira yedu yemagetsi inopinda mumusika wakakosha wekumabvazuva kweEurope iri kuramba ichikura nekuda kweWizz Air, zvinova zvinofadza kwatiri," anodaro Michael Garvens, Sachigaro weManagement Board, Cologne Bonn Airport. Akawedzera kuti: "Sezvo makambani mazhinji eGerman agara muKošice nenzvimbo dzakapoterera, nzvimbo nyowani kubva kuCologne Bonn inokwezva kwete chete kune vashanyi asiwo kune uyo anofamba bhizinesi."
Kuwedzera kweWizz Air kwazvino kwekubatana kwayo kubva kuCologne Bonn zvinoreva kuti chinongedzo kuguta guru reSlovakia chinova nzvimbo yechisere yeULCC kubva kunhandare yendege yeGerman. Kutanga chirongwa chayo chekutanga kuSlovakia, Cologne Bonn network ikozvino inosanganisira gumi nemana ekubatana mukati meCentral neEastern Europe nharaunda.